गुमाइ दियो । मेरो इज्जत बताउनेलाइ 1000 हजार रुपैयाँ पुरस्कर | साहित्य संगित मनकाे आवाज
Home / Uncategories / गुमाइ दियो । मेरो इज्जत बताउनेलाइ 1000 हजार रुपैयाँ पुरस्कर
गुमाइ दियो । मेरो इज्जत बताउनेलाइ 1000 हजार रुपैयाँ पुरस्कर
कृष्ण बहादुर सर्तुङ्गे मगर गुल्मी
2015/6/8 तारिख आइतबार साझ 5:30 मा मेरो प्रोफाइलमा आएको अस्लिल याने कि ? सेक्स भिडियोले साहरै दुखी बनाएको छ । र यो मैले डिलिट गरे । र केही मिनेटमा इमेल खुलाए तर सबैको म्यासेज आउन लागेयो । र म सोचे फेरि प्रोफाइलमा हेरे मेरै नाम बाट मेरो सबै फेसबुक साथीहरूलाई यो भिडियो त्याग भएछ । तर मैले पोस्ट गरेको होइन । तर होइन भने र तपाईंहरुलाइ बिश्वास हुदैन किन? कि । मेरै नाम बाट गएको छ । जो डिलिट गरे त्यो भिडियो श्रीलंकाले मलाइ त्याग गरेको रहिछ । र फाले फेरि अर्को चेन्ज हुँदै मेरो नाम बाट गएको रहेछ ।सम्पुर्ण साथीहरू प्रति माफी माग्द छु । यो अरु कसैको षड्यन्त्र भएको हो । यो पिडाले र यो ब्यवहारले गर्दा मलाई तपाइहरुले कुदृश्ती विचारले सोच्नु भएको छ । तर मैले होइन । किन र कसरी भयो । गयो मलाइ नै थाहा छैन । त्यसैले म
लज्जीत छु । मेरो फेसबुक बन्द गर्ने सोच गरेको छु । यदि म्यसेज पठाउनु भएको भए । रिप्लाए आएन भनेर घुनासो नगर्न अग्रह गर्दछु sahiya.sangit@gmail.com र मोबाईल नम्बर 00966592114835 मा जानकारी गराउनु होला ।
। तर म तपाईंहरुलाइ यो सूचना पनि प्रकाशित गर्न चाहन्छु । यदि तपाईंले कोहि कसैले मेरो इमेल पासपोर्ट बाट मेरो फेसबुक खोलेको देख्नु भयो र थाहा पाउनु भयो । भने तपाईंलाइ 1000 हजार रुपैयाँ पुरस्कर प्रधान गर्ने छु । खुलाउनेको वास्तविक नाम ठेगाना । र जानकारी गराउने तपाईंको नाम ठेगाना मेरो इमेलमा पठाउनु होला । तर तपाईंको नाम गोप्या राखिने छ । मलाइ २०७२ ले अरुलाइ मात्र होइन मलाइ पनि कालो दिन छाइ रहेको प्रमाणित भएको महसुस गरि रहेको छु । धन्यवाद । मेरो इमेल